Cold asongwe Steel Workshop
Lamakhoyili ohlobo Cold asongwe akhiqizwa ku high speed 6Hi Izigayo ugingqe kuthiwa sopplied yithi kuzo zombili umnyuziki kanzima futhi annealed condition.Superior ebusweni izinga ohlobo ezibandayo ukuvumela isicelo ububanzi njengoba substrate for enamathela metal (lashukumisa) galvalume, impahla eluhlaza for amapayipi, amashubhu, ama-drum / umnyango / ifenisha lensimbi nezinye ubunjiniyela jikelele isebenzisa.
Hot bacwilisa Galvalume steel Workshop
Galvalume steel ikhoyili iwumkhiqizo okuyinto kakhulu efana steel lashukumisa kodwa okungcono ukugqwala ukumelana (kuze kube izikhathi 3 impilo lashukumisa) .I izakhiwo supperior ka galvalume uvuke Ukwakheka esiyingqayizivele (43.5% Zn, 1.5% Si, 55% AL ) umgwengwezi metallic. Izicelo zihlanganisa ukufulela base impahla ngoku-imidwebo.
Hot bacwilisa lashukumisa steel Workshop
Lashukumisa Steel Amakhoyili akhiqizwa ngenqubo enamathela metal okubandakanya ohlobo abandayo iphuma edabula ngeketela equkethe zinc esibunjiweyo. Le nqubo kuqinisekisa adhesion Zinc ukuze kobuso steel ishidi. I Zinc Layer inikeza kakhulu ukugqwala ukumelana naso futhi kwenze ukuphila inkonzo alula. Hot idiphu imikhiqizo lashukumisa kabanzi zasendlini, ezokuthutha, isitsha yokukhiqiza, ukufulela, base impahla ngoku-imidwebo, ababephelezela nezinye izinhlelo zokusebenza ukwakhiwa okuhlobene.
Umbala camera ngensimbi Workshop
Lamakhoyili ohlobo Oku-ngesineke akhiqizwa lokunameka ungqimba upende phezu ohlobo abandayo iphuma, lashukumisa noma galvalume ka. Isikhalazo Tebuciko futhi ihlala isikhathi eside kukhona izimpawu ezisemqoka umbala camera ohlobo steel. Kufanele kukhetfwe tinhlobo letibanti imibala uyatholakala ikhasimende nopende ahlelelwe ukuhlangabezana ekupheleni ukusetshenziswa ethize kungenzeka icaciswe. Lamakhoyili ohlobo yethu zangaphambi ngesineke Site ingaphakathi ngqo kanye isicelo yangaphandle, isangweji panel kanye nokunye.
Corrugation Workshop-lukathayela zophahla ishidi
Ishede kanye mpahla